Dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay Saraakiil iyo Askar – XAMAR POST
Dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay Saraakiil iyo Askar
By Zakariye iiman On Apr 14, 2019
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Magalada Muqdisho ku dagaalamayay Ciidamo ka wada tirsan kuwa Dowladda kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah,waxaana dagaalkaas dhexmaray Ciidamada War kasoo saaray taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa sheegay in dagaalka dhexmaray labada Ciidan ay saraakiil u xir xireen.
Waxaa uu taliye Bashiir Ameeriko digniin u diray ilaalada Madaxda Dowladda,waxaana uu sheegay in lagula xisaabtami doono dagaalada dhexmaraya Ciidamada ilaalada u ah iyo kuwa howlgalalda ka wada Magalaada Muqdisho.
Markii Magalada Muqdisho ay ku wada dagaalamaan Ciidamada dhexdooda ayaa khasaaraha ugu badan waxaa ay gaartaa dadka Shacabka ah ee ku sugan Goobaha lagu dagaalamay taas oo aysan jirin cid wax iska weeydiisa.
SAWIRO:-Maxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiirada Hir-Shabeelle?